Wali Waxaan Leenahay Wadaniyiin Geesiyiina oo dadnta Guud u Taagan. | ogaden24
Wali Waxaan Leenahay Wadaniyiin Geesiyiina oo dadnta Guud u Taagan.
Dec 2, 2018 - Aragtiyood
Dhibaatada Qayb ahaan Ummada Soomalida Haysata waxa ka mida inay Qariyaan Guusha Qofka kale ee Somaaliyed Taasina Waa xanuun kalsooni darro oo dadka ku dhaca waana inagu badanyahay xanuunkaasi.
Waxaa Hubaala marka aynu Qiro waxa uu Yahay Ruuxa kale xumaan iyo samaan ba inay soo baxayso Ummada ama bulsho caafimaad Qabta oo Jiilka dambe Jiilkii kahoreeyay Halkay mareen maro, waxaa Hubaala Hadaad xaqirto, xumayso ama aad iskudaydo inaad Qariso wanaaga Somaali kale inaysan Taariikhdu Qarinayn.
Hadaba Akhristo waxaan Halkan idiinku soo Gudbinaynaa Qormo kooban oo bahda Midnimo Web Tv ay 25-ka bishii August, kaqortay Labada Hal Abuur ee Guud ahaan bulshada Somaaliyeed dhex-deeda caanka ah waa Abwan Jaango iyo Abwanad Rooda Afjano e bal Hada Arkhriso Qormadaasi.
Wakhtigii uu maqnaa damiirka qofka soomaliga ah, Wakhtigi dadnimadu maqnayd, Wakhtigi dunta qofka soomaliga dhaawacantay, Wakhtigi haldoorka iyo qofka magaca leh lacag lagu kasban jirey, Wakhtigi dadka badankiisu niyad jabay, Wakhtigii guumaysi iyo dabaqoodhi loo baratami jirey, Wakhtigi umada la bahdiley.
Waxa jiray dad badan oo damiirkoodu u diidey, In ay dadkooda iibsadaan, Waxa jiray dad badan oo dadnimadoodu noolayd, Waxa jirey dad badan oo quudhsiga diidey, Waxa jirey dad badan oo rajo qabay, Waxaa jirey dad badan oo Somalinimadu wax walba kala wayneyd.
Taas awgeed qaarba naftoodi ku waayay, Taas awgeed qaarbaa dadkoodi ku waayay, Kuwa nool Ee weli damiirka dadnimo iyo midka soomalinimo leh masoo koobi karo balse Waxaan soo qaadanaynaa.
Maxamud Cabdi cumar (jaango)
Wakhtigii Fanaan walba cabdi iiley iibsaday, Jaango wuxu cabdi u sheegey inay dadnimadisu Ka qiima badantahay lacag.
Wuxu u sheegey inuu halganka Ummadu yahay muqadas oo marnaba uusan ka Tanaasulayn, Ethiopia wax walba way samaysey, si ay usoo xero geliso Lkn wuxu ku adkaystay in umada soomaliyeed gumaysiga ka baxdo amase Halgankaa uu ku dhamaysto noloshiisa.
Roda Ibrahim C .Gurey ( Rodo Afjano)
Waa gabadh ilaahay hibo siiyay oo ilaahay xikmad aragti fog ugudeeqey Waxay qayb wayn ka qaadatay wacyi gelinta umadeena.
Dhib walba way ugu samirtay sidi umada soomaliyeed sharaf ugu nolaan lahayd Waa muraayada aan ka dhex arki karno, Dunta wanaagsan Ee haweenka soomaliyeed Waxay uqalanta in buug gaar ah laga qoro.
Ilaahay waxaan ka baryayaa inti umada sharafteeda iyo karaamadeeda iyo mustaqbalkeeda u dhimatay in uu naxariis janno siiyo.
Kuwa nool ee umadan dhibkeeda usoo dhabar adaygay Ee katanaasuli waaayay soomalinimadooda
Ilaahay hadhowro cumrigana ha u dheereyo.
Soomalidu waxba iskuma qiraan Umadaha kale haldoorkooda way ku faanan ilaahay cuqdada qabiil hanaga saaro
Midnimadeenu Waa guusheena
C salaam sheekh xasan